Home Wararka Maxaa ka soo baxay kulankii caawa ee Guudlaawe, Qoor-qoor & Fahad Yasin?...
Maxaa ka soo baxay kulankii caawa ee Guudlaawe, Qoor-qoor & Fahad Yasin? Fashilinta shirka WQ
Fahada Yasin ayaa waxa uu isugu yeeray kulan deg deg oo ay ka soo qaybgaleen Ali Guud laawe, Qoor-Qoor kaas oo looga hadlaayay sidii loo fashilin lahaa shirka Wadashiga Qaran oo lagu wado in uu maalinta berito ah ka furmo magaalada Muqdisho.
Sida MOL ku heshay xog rasmsi ah, Shirka caawa oo kad hacay Hotel Peace dhawaana soo dhaamaaday ayaa waxa looga arinsaday sidii loo xaqiijin lahaa in labadaan Dowlad Goboleed ay si wadjira uga horimaan lahaayeen go’aanada la doonayo in ay ka soo baxaan shirkaa Wadatashiga Qaran.
Fahad Yasin ayaa labada Madaxweyne ku amray in ay qaadeen tilaabo kastaa oo fashilin karta shirka berti loo balansan yahay taas oo ay ka mid tahay in gabi ahaanba Cali Guudlaawe uu berito ka safro magaalada Muqdisho una safro Magalaada Baladweyne si shirka u furmin.
Dhanka kale, musharaxiinta u tartameysa kursiga Madaxweynaha dowlada Federalka ee intooda badan ka soo jeedaan labadaas dowlad Goboleed (Galmudug iyo Hirshabelle) ayaa u muuqda kuwa hurda iyada oo uu Fahad Yasin ku tagrifalayo deeganadii ay ka yimadeen. Sidee bay musharaxiintaas Soomaali kursi kaga raadsan karaa Soomaaliada kale mar hadii deeganadii ay ka soo jeedeen uu Fahad Yasin sida uu doono ka yeelayo.